Ny anjerimanontolom-panjakan'i San Diego dia manara-penitra amin'ny mikrônônera vaovao ho an'ny MAS-A100 IP an'ny Sony NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Ny anjerimanontolom-panjakan'i San Diego dia manara-penitra amin'ny mikrônônin'ny fitenenana vaovao MAS-A100 IP an'ny Sony
Ny University Outfits efa ho 200 ny efitrano fianarana manerana ny Campus Main sy Imperial Valley miaraka amin'ny Lecture tsy misy tanana sy ny vahaolana fampisehoana
San Diego State University vao nametraka 68 ny Sony's MAS-A100 mikrôfôna valindrihana miorina amin'ny valindrihana, miaraka amina drafitra ho avy hampihatra singa fanampiny fanampiny maherin'ny 100. Amin'ny maha campus lehibe azy ireo sy ny oniversite Imperial Valley mankany amin'ny modely an-dakilasy hybrid, fampifangaroana ny fanabeazana manokana sy ny halaviran-dàlana, ny MAS-A100 izay ampiasain'ny IP dia nanjary singa fototra iray amin'ny fananganana ny efitranon'izy ireo amin'ny ho avy.
Natao ho an'ny tontolon'ny lahateny sy famelabelaran-kevitra, ny mikrô mampitatra MAS-A100 manolotra feo mazava mandroso ho fanamafisana ny kabary miaraka amina fiasan-tsaina Intelligence Feedback Reducer, izay afaka mamoaka kabary nefa manindry ny hevitra tsy ilaina. Ny mora mametraka microphone dia mampihena ny tabataba amin'ny manodidina, manome fanaraha-maso mandeha ho azy ary manana fantsona roa-fantsona ho an'ny firaketana miaraka izay manintona ny feon'ny mpampianatra sy ny mpianatra. Izy io dia mifanaraka amin'ny mixer Dante® an'ny antoko fahatelo, mpanova ary fitaovana hafa, ary koa ny fahefana amin'ny Ethernet (PoE). Ny tariby tokana dia afaka mampifandray azy amin'ny rafitra.
"Rehefa namelombelona ny volon'ny efitrano fianaranay noho ny areti-mandringana izahay, dia nitady traikefa tsy nisy tohiny mba hiarovana ireo mpiasa sy hanarahana ny fombafomba momba ny fahasalamana sy fiarovana," hoy i Rudy Arias, Tale mpiara-miasa, Serivisy teknolojia fampianarana, oniversite San Diego State University. “Izahay dia nitady vahaolana audio izay ho maimaim-poana, mora ampiharina, lafo ary manome feo avo lenta avy amin'ny toerana rehetra. Rehefa nampahafantarina antsika ny Sony Mikropono valindrihana IP amin'ny alàlan'ny demo virtoaly, nametraka ny kaontinay tao anatin'ny ora maromaro izahay. Fantatray teo noho eo fa nahafeno ny lisitry ny zavatra takianay izy io ary ho vahaolana azo antoka ho an'ny traikefa momba ny hybrid vaovao. Eo am-pametrahana azy ireo manerana ny campus roa izahay izao mba hisy fiantraikany lehibe kokoa ary hanamora ny fiainana fanabeazana mahaliana kokoa ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra, ary izahay dia manadihady sy mizaha toetra fanampiny Sony vahaolana an-dakilasy mba hamenoana ireo mikrô vaovao ary hanatsarana ny fahaizantsika miseho. ”
"Ny MAS-A100 dia manolotra fiasa mahasoa maromaro izay manatsara ny traikefa an-tsokosoko, ao an-dakilasy na an-trano, ao anatin'izany ny fahaizana mandray an-tsoratra lahateny ho an'ny tanjona takiana," hoy i Theresa Alesso, filohan'ny Diviziona Pro, Sony Electronics. “Rehefa mamakivaky fomba vaovao fampianarana sy fifandraisana amin'ny mpianatra lavitra ny oniversite dia nanjary faritra ifantohana voalohany ny feo. Ny kalitaon'ny feo madiodio avy amin'ireo mikrôfônan'ny taribentsika dia manorina fototra mafy orina amin'ny fampitomboana ny fifandraisana, sady ahafahana mifanakalo hevitra roa-fomba izay mampanan-karena ny fianarana.
University of San Diego State dia manana efitrano fianarana miaraka aminy Sonyny teknolojia mikrô vaovao ho an'ny semester amin'ny fararano, miaraka amina drafitra hanampiana vondrona hafa amin'ny ho avy.
Previous: Nanjary tsy maintsy natao tamin'ny paikady stratejika ny fantsom-panafody
Next: Matrox Extio 3 IP KVM dia mifanentana amin'ny tsipika Product Product Ross XPression